Ubumfihlo kanye Nemigomo - WoopShop ®
Uyemukelwa ku-WoopShop.com. Ngenkathi ubhekabheka noma uthenga kusuka ku-WoopShop.com, ubumfihlo bakho nemininingwane yakho yangasese kuyavikelwa futhi kuyahlonishwa. IWoopShop.com inikeza izinsiza ezingcono kakhulu kuwe ngokuya ngezaziso, imigomo nemibandela ebekwe kuleli khasi.
• IWoopShop.com ihlonipha ubumfihlo bazo zonke izivakashi noma ikhasimende lewebhusayithi futhi zikuthathe ngokuphepha ukuphepha kwakho ku-inthanethi.
• IWoopShop.com iqoqa imininingwane ifaka i-imeyili yakho, iGama, iGama Lenkampani, Ikheli Lasemgwaqweni, Ikhodi Leposi, Idolobha, Izwe, Inombolo Yezingcingo, Iphasiwedi nokunye, ukuze siqale, sisebenzisa amakhukhi adingekayo ukuhlanganisa nokuhlanganisa okungekhona imininingwane ekhomba wena uqobo mayelana nabavakashi esizeni sethu. Imininingwane yehlukile kuwe. Abasebenzisi, noma kunjalo, bangavakashela isiza sethu ngokungaziwa. Sizoqoqa imininingwane yobunikazi eqondene nabasebenzisi kuphela uma bethula leyo mininingwane kithi ngokuzithandela. Abasebenzisi bangahlala benqabile ukunikezela ngemininingwane yokuhlonza uqobo, ngaphandle kokuthi kungabavimbela ukuthi bahlanganyele emisebenzini ethile ehlobene neSayithi.
• Singakwazi ukuqoqa imininingwane yobunikazi evela kubasebenzisi ngezindlela ezahlukahlukene, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, lapho Abasebenzisi bevakashela isiza sethu, babhalisa esizeni, beka i-oda, bephendula inhlolovo, bagcwalisa ifomu, futhi bexhumana neminye imisebenzi, izinsizakalo, izici noma izinsizakusebenza esizenza sitholakale esizeni sethu. Abasebenzisi bangacelwa, kufanelekile, igama, ikheli le-imeyili, ikheli le-imeyili.
• Sisebenzisa imininingwane ukusisiza ukuthi sikulungele ngokwengeziwe ukusebenzisa, ukuphendula izicelo noma izikhalazo, ukusisiza ukuthi sikhombise okukufanele kakhulu futhi sikukhumbuze imininingwane entsha, imikhiqizo ngokuthengisa, amakhuphoni, ukukhushulwa okukhethekile nokunye kuvuliwe.
• Ngesikhathi sokubhalisa kwakho, uzokwaziswa ukuthi usinikeze igama lakho, ikheli lokuthumela nelokukhokhisa, inombolo yocingo, kanye nekheli le-imeyili. Lezi zinhlobo zolwazi lomuntu siqu zisetshenziselwa izinhloso zokukhokha, ukufeza imiyalo yakho. Uma sinezinkinga lapho sicubungula i-oda lakho, singasebenzisa imininingwane yomuntu siqu oyinikezayo ukuxhumana nawe.
• Ungasusa ukubhalisa ngokusebenzisa isixhumanisi kusuka kunoma iyiphi incwadi yezindaba ye-imeyili noma isilungiselelo sakho sokubhaliselwa komuntu siqu ngemuva kokungena ngemvume.
• Singase siqoqe imininingwane engeyona eyeyakho mayelana nabasebenzisi noma nini lapho bexhumana neSayithi lethu. Imininingwane engeyona eyomuntu uqobo ingafaka igama lesiphequluli, uhlobo lwekhompyutha nolwazi lwezobuchwepheshe mayelana nezindlela zokuxhumana zabasebenzisi ekuxhumeni isayithi lethu, okufana nohlelo olusebenzayo kanye nabahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi abasetshenzisiwe kanye neminye imininingwane efanayo.
• Isayithi lethu lingasebenzisa "amakhukhi" ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi. Isiphequluli sewebhu somsebenzisi sibeka amakhukhi kwi-hard drive yazo ngezinjongo zokugcina amarekhodi futhi kwesinye isikhathi ukulandelela imininingwane ngazo. Abasebenzisi bangakhetha ukusetha isiphequluli sewebhu sakho ukwenqaba amakhukhi noma ukukuqwashisa lapho kuthunyelwa amakhukhi. Uma benza njalo, qaphela ukuthi ezinye izingxenye zeSayithi zingahle zingasebenzi kahle.
• I-WoopShop iqoqa futhi isebenzise imininingwane yabasebenzisi ngezinjongo ezilandelayo:
• Semukela ukuqoqwa kwedatha efanelekile, ukugcinwa, kanye nokusebenza kokusebenza nezinyathelo zokuphepha ukuvikela ekufinyeleleni okungagunyaziwe, ukuguqulwa, ukudalulwa noma ukubhujiswa kwemininingwane yakho yangasese, igama lomsebenzisi, iphasiwedi, imininingwane yokuthengiselana kanye nemininingwane egcinwe eSayithini yethu.
• Asithengisi, asithengisi, noma siqashe imininingwane yokusebenzisa yomuntu siqu yabasebenzisi. Singabelana ngemininingwane ejwayelekile ye-demographic demographic engaxhunyiwe kunoma imiphi imininingwane yokuhlonza yomuntu siqu ephathelene nezivakashi nabasebenzisi nabalingani bethu bebhizinisi, abaxhasi abathembekile nabakhangisi ngezinhloso ezichazwe ngenhla. Singasebenzisa abahlinzeki bensizakalo evela eceleni ukusisiza ukuqhuba ibhizinisi lethu neSayithi noma ukuphatha imisebenzi thina, njengokuthumela izincwadi noma ucwaningo. Singabelana ngolwazi lwakho nalaba bantu besithathu ngalezi zinhloso ezikhawulelwe uma usinikeze imvume yakho.
• Abasebenzisi bangathola ukukhangisa noma okunye okuqukethwe kusayithi lethu okuxhumanisa neziza nezinsizakalo zabalingani bethu, abahlinzeki, abakhangisi, abaxhasi, abanikezeli belayisense kanye nabanye abantu besithathu. Asilawuli okuqukethwe noma izixhumanisi ezivela kulezi zingosi futhi azibophezeli emisebenzini esetshenziswa ngamawebhusayithi axhumene noma avela kusayithi lethu. Ngaphezu kwalokho, la masayithi noma izinsizakalo, kufaka phakathi okuqukethwe kwazo nezixhumanisi, kungenzeka kuguquke njalo. Lawa masayithi nezinsizakalo angaba nezinqubomgomo zawo zobumfihlo nezinqubomgomo zensiza yamakhasimende Ukuphequlula nokuxhumana kunoma iyiphi enye iwebhusayithi, kufaka phakathi amawebhusayithi ahlobene neSayithi lethu, kuncike kwimigomo nezinqubomgomo zaleyo webhusayithi.
• Lesi sigaba soMgomo Wobumfihlo sichaza ukuthi idatha yomuntu siqu isetshenziswa kanjani ezinsizeni zokukhokha ze-Apple (i-Apple iyakhokha). Ngaphezu kwalokho, kufanele ufunde imigomo nemibandela ye-Apple Pay. Imisebenzi yakho yebhizinisi ngeWoopShop ayihlobene ne-Apple Inc.
• I-WoopShop inokuqonda ukubuyekeza le nqubomgomo yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi. Sigqugquzela Abasebenzisi ukuthi bavame ukubheka leli khasi uma kukhona noma yiziphi izinguquko ukuze bahlale benolwazi lokuthi sisiza kanjani ukuvikela imininingwane yomuntu esiqoqa. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi kungumsebenzi wakho ukubuyekeza le nqubomgomo yobumfihlo ngezikhathi ezithile futhi wazi ngokushintshwa.
• Ngokusebenzisa le Ndawo, ukhombisa ukwamukela kwakho le nqubomgomo. Uma ungavumelani nale nqubomgomo, sicela ungasebenzisi iSayithi lethu. Ukuqhubeka kwakho nokusebenzisa isiza kulandela ukuthumela izinguquko kule nqubomgomo kuzothathwa njengokwemukela kwakho lezo zinguquko.
• Uma unemibuzo mayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo, imikhuba yaleli sayithi, noma ukusebenzisana kwakho naleli sayithi, sicela uxhumane nathi ku [Email protected] or [Email protected]
I-2. Imigomo nemibandela
• Umela futhi uqinisekisa ukuthi okungenani uneminyaka engu-18 ubudala noma uvakashela iSayithi ngaphansi kweso labazali noma umnakekeli. Uzoba nesibopho sokufinyelela konke ukusetshenziswa kwaleli sayithi yinoma ngubani osebenzisa iphasiwedi nokuhlonza okwabelwe wena ukuthi ukufinyelela noma ukusetshenziswa kwaleli sayithi kugunyazwe nguwe.
• IWoopShop.com ingahanjiswa kusuka ezindaweni zokugcina ezahlukene. Ama-oda anento engaphezu kweyodwa, singahlukanisa i-oda lakho emaphaketheni ambalwa ngokuya ngamazinga wesitoko ngokubona kwethu. Ngiyabonga ngokuqonda kwakho.
• Ngaphandle kokuthi kuhlinzekwe ngenye indlela kuleli khasi noma isayithi, noma yini oyithumela noma oyithumela ku-WoopShop.com, kubandakanya ngaphandle komkhawulo, imibono, indlela, amasu, imibuzo, ukubuyekezwa, ukubekwa kwamazwana neziphakamiso ngokuhlanganyela, izethulo zizophathwa njengoba okungeyona eyimfihlo futhi kungagcineki, futhi ngokuthumela noma ukuthumela, uyavuma ukuthola ilayisense ngokungenakuphikiswa ukungena kwawo kanye nawo wonke amalungelo e-IP ahlobene nawo ngaphandle kwamalungelo wokuziphatha anjenge ilungelo lobuqambi ku-WoopShop.com ngaphandle kwenkokhiso futhi iWoopShop izoba nobukhosi.
• Ngeke usebenzise ikheli le-imeyili elingamanga, uzenze umuntu ongeyena umuntu wakho, noma ngenye indlela udukise i-WoopShop.com noma amaqembu esithathu ngokuvela kokunye ukuthunyelwa noma okuqukethwe. IWoopSHop.com kungenzeka, kodwa ngeke inesibopho sokususa noma ukuhlela noma yikuphi ukuhanjiswa okufaka imibono noma ukubukeza nganoma yisiphi isizathu.
• Yonke imibhalo, ihluzo, izithombe noma ezinye izithombe, izithonjana zenkinobho, iziqeshana zomsindo, ama-logo, iziqubulo, amagama okuhweba noma isoftware yamagama nokunye okuqukethwe kuwebhusayithi yeWoopShop.com ngokuhlangene, Okuqukethwe, kungokwakwaWoopShop.com kuphela noma okuqukethwe kwawo okufanele abahlinzeki. Wonke amalungelo anganikezwe ngokuqondile agodliwe yiWoopShop.com. Abaphula umthetho bazoshushiswa ngokuphelele ngomthetho.
• Sicela uqaphele ukuthi kungaba nemiyalo ethile esingakwazi ukuyamukela futhi kufanele siyikhansele. Womabili la maqembu avumelana ngokuthi, ngokulandela ukuthunyelwa kwama-oda, izinto zokuhamba kuwukuphela kwesibopho senkampani yeqembu lesithathu. Ngalesi sigaba, ubunikazi obugcwele bomkhiqizo (b) bomthengisi; zonke izikweletu nezingozi ezihambisana nazo ngenkathi zokuhamba zizothwalwa ngumthengi.
• IWoopShop.com ingaqukatha izixhumanisi kwamanye amasayithi ku-inthanethi okungokwabantu futhi okuqhutshwa ngabantu besithathu. Uyavuma ukuthi i-WoopShop.com ayibophezeli ekusebenzeni noma kokuqukethwe okukhona noma nganoma isiphi isiza esinjalo.